lundi, 10 mai 2021 10:16
Dr Andrianandrasana Gilbert : Nankasitrahan’ny Amerikana noho ny fahaiza-mitarika nasehony
Notoloran’ny Ambasady amerikana mari-pankasitrahana “Champions of Madagascar Mpiaradia” sy medaly i Dr Andrianandrasana Gilbert, Chief of Party ao amin’ny tetikasa IMPACT an’ny USAID Madagascar, noho ny fahaiza-mitarika miavaka nasehony tamin’ny fandrindrana sy fitsinjarana ireo fitaovana fiarovan-tena manokana (EPI) ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana eto Madagasikara. “Zava-poana ny fanohananay ny governemanta Malagasy sy ny ezaka ataony hiadiana amin’ny Covid-19 raha tsy misy ny mahery fon’ny fahasalamam-bahoaka toa an’i Dr Gilbert sy ny mpiara- miasa aminy ao amin’ny IMPACT”, hoy ny Ambasadaoro Pelletier. Nitàna andraikitra lehibe i Dr Gilbert tamin’ny fiantohana fa voarain’ireo mpiasan’ny fahasalamana teny anivon’ny hopitaly sy tobim-pitsaboana CSB tany amin’ny faritra 13 manerana an’i Madagasikara ireo fitaovana avy amin'ny Departemantan’ny Fiarovana amerikana.
dimanche, 09 mai 2021 12:36
Fampianarana ambony : Nodimandry i Pr Marcel Napetoke
Mpampianatra mpikaroka tao amin’ny oniversiten’i Toliara, minisitry ny toekarena sy ny tetipivoarana teo aloha i Pr Marcel Napetoke. Mpikatroka tao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara ihany koa izy.
samedi, 08 mai 2021 13:05
NOTAM Numero A0802/21
Manan-kery ny 05/05/2021 ka hatramin'ny 20/05/2021 Tsy maintsy midina sy miainga avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Antananarivo avokoa ireo fiaramanidina avy any ivelany, na ireo andeha any ivelany rehetra.
samedi, 08 mai 2021 12:22
Sary UNICEF Madagascar
Covid-19 : Tonga ny vakisiny voalohany
Tonga izao eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato eto Antananarivo ny fatra voalohany ny vaksinin'ny COVID-19 avy amin'ny COVAX mampivondrona ny GAVI, CEPI, OMS ary UNICEF. (Loharanom-baovao UNICEF Madagascar) (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 07 mai 2021 19:29
Raharaha volamena 73.5kg : Naverina any Tsiafahy ireo mpanamory mirahalahy
Niakatra ny fanadihadiana lalina androany, teo anivon'ny Pôle anti-corruption 67ha ireo mpanamory mirahalahy, nitondra ny fiaramanidin’ny orinasa STA, nitondrana ny entana tamin’io, toy izany koa ny Sekretera jeneralin’ny Aviation Civile de Madagascar na ACM. Naverin'ny fitsarana any Tsiafahy avokoa izy ireo, ary any no afaka mangataka fahafahana vonjy maika, na dia nanao izany teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly androany aza izy ireo. Tsy nisy nipika ny fanadihadiana tao. fantatra ihany koa fa ireo olona ambiny amin'ny 13 voarohirohy eto an-toerana amin'izao raharaha izao dia ny talata 11 mey no hiakatra atao fanadihadiana.
vendredi, 07 mai 2021 14:10
Vaksiny Covid-19 : Nihemotra ho rahampitso sabotsy ny fahatongavany
Rahampitso Sabotsy 08 may 2021 maraina no ho tonga eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ireo vaksiny nafaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Fantatra io nandritra ny fivahinianan’i Dr Rakotonavalona Rivomalala, Talen'ny DEPV eto anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tao amin'ny Vaovao an-tsarin'ny Televisiona Malagasy io atoandro io. Notsindriany fa tsy misy fiovana ny daty hanombohana ny fanaovam-baksiny fa ny Alatsinainy 10 may 2021 ihany, ary ny Faritra Analamanga sy Vakinankaratra no hanombohana izany.
vendredi, 07 mai 2021 14:09
Rolly Mercia : Nohamafisin'ny Fitsarana ambony ny fitazomana azy 44 volana am-ponja
Nohamafisin'ny Fitsarana ambony Antananarivo teny amin'ny lapam-pitsarana Anosy, androany, ny didy navoakan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, itazomana am-ponja 44 volana an’i Rahajason Harry Laurent, fantantra amin'ny solon'anarana koa hoe : Rolly Mercia. Tondroina ho nanarama olona hanakorontana teny Ambohipo izy ny 13 jolay 2020, manohintohina ny filaminana anatin'ny firenena. Mpanao gazety i Rolly Mercia ary efa minisitry ny serasera tamin'ny fitondran'i Hery Rajaonarimampianina. Olona akaikin'ny filoha ankehitriny kosa izy tamin'ny andron'ny Tetezamita ary nitana andraikitra ambony teo anivon’ny vondrona politika MAPAR.
vendredi, 07 mai 2021 08:35
Covid-19 : Andrasana anio ny vaksiny
Vaksiny 250 000 fatra no ho avy eo Madagasikara. Ity andron’ny 7 may 2021 ity no voalaza fa hahatongavany. “Covishield”, vita indianina, iray amin’ireo vaksiny efatra nosafidian’ny Akademia nasionaly ny fitsaboana eto Madagasikara sy ny komity siantifika, ity vaksiny ho avy ity. Ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan’ny fahasalamana ary ireo zokiolona, miampy ireo manana areti-mitaiza toy ny sohika, diabeta, tosidra avo no hisitraka voalohany ity vaksiny ity, izay hanomboka amin’ny 10 may 2021 ny fanaovana izany.
jeudi, 06 mai 2021 20:53
Polisim-pirenena : Nodimandry kaomisera Ranaivoson Alexandre Sylvain (Chef SICRI)
Nodimandry ny hariva teo i kaomisera Ranaivoson Alexandre Sylvain. Mpiandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana eo anivon’ny Polisim-pirenena izy (CHEF SICRI) no izao lavo amperinasa izao. Diso fantatra eo amin’ny tontolon’ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety ary ny fifanakalozam-baovao i kaomisera Ranaivoson Alexandre Sylvain. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 06 mai 2021 19:47
Antsirabe : Nivadika sakoroka ny fampanajana ireo fepetra fihibohana
Doro kodiarana, baomba mandatsa-dranomaso, poa-basy, tora-bato, tabataba nanomboka amin'ny 2ora tolakandro ora fanombohan'ny fihibohana ary mitohy io hariva io. (Jereo Sary Tohiny)